रातिको खानापछि फलफूल खानु उ’चित कि अ’नुचित ? – Khabar PatrikaNp
काठमान्डौ , हामीमध्ये अ’धिकांश व्यक्तिलाई रातिको खानामा केही मि’ठो अथवा गु’लियो खानेकुरा खान मन लाग्छ । स्व’भाविकै हो, यदि तपाईं आफ्नो शरीरको वजन कम गर्न थाल्नु भएको छ भने गुलियो खाने तलतललाई कुनै फलफूलबाट पुरा गर्नु पर्नेछ । फलफूलहरु प्रायः स्वा’स्थ्यवद्र्धक, रसिलो, पो’षणले भरिपूर्ण, प्राकृतिक रुपमै गुलियो तथा कुनै मिठाई अथवा चकलेटभन्दा धेरै गु’णा उत्कृष्ठ हुन्छ । त्यसो त, सधैं के कुरामा बहस हुन्छ भने राति फलफूल खानु कत्तिको सही हो ?आ’युर्वेदका अनुसार जब तपाईं खाना खानु हुन्छ त्यसलगत्तै फलफूल खानु पा’चनक्रियाको लागि राम्रो होइन ।
प्राचीन चि’कित्सा प्रणालीले सुत्नुभन्दा कम्तिमा ३–४ घण्टा पहिला डि’नर गरिसक्नु पर्ने बताउँछ । यदि तपाईंले फलफूल तथा खाना एक साथ खानु भयो भने तपाईंको शरीरले पहिला फलफूललाई पचाउँछ र त्यसपछि खानालाई पचाउँछ । जसका कारण पेट ख’राब हुने स’मस्या हुनसक्छ र साथै तपाईंको शरीरले खानाको आवश्यक पो’षणको फाइदा पनि उठाउन पाउँदैन ।यहाँनेर, कतिपय मानिसहरुको भनाइ के छ भने सुत्नुभन्दा पहिला फलफूल खानाले राम्रो नि’द्रा पर्छ । तर, वास्तविकता त्यसको ठिक वि’परित हुन्छ । फलफूलले शरीरमा चिनीको मात्रा ब’ढाउँछ ।
जसले तपाईंको उर्जालाई ब’ढाइदिन्छ र राति सुत्दा तपाईंलाई अ’फ्ट्यारो हुन सक्छ । तर, यसको अर्थ राति फलफूल खानै हुँदैन भन्ने चाहिँ होइन । यसलाई समय मिलाएर राति पनि खान सकिन्छ । तपाईंले रातिको खाना खाएको कम्तिमा ४५ मिनेटपछि कुनै फलफूल खान सक्नु हुन्छ ।तपाईंले सुत्नुभन्दा अघि कुन फल खाने भन्ने कुरामा पनि ध्यान दिनु अ’निवार्य छ । राति प्लेटभरीको फलफूल खानु हुँदैन । यदि तपाईंलाई गु’लियो नै खान मन छ भने फलफूलको एक–दुई टु’क्रामात्रै लिनु पर्छ । जसमा चिनीको मात्रा क’म तथा फा’इबर बढी होस् ।
जस्तो तरबुजा, नासपाती अथवा किबीजस्ता फलफूल खान सकिन्छ । राति फलफूल खाने बित्तिकै सुत्नु पनि हुँदैन ।सबैभन्दा म’हत्वपूर्ण कुरा के हो भने रातिको खाना तथा फलफूल से’वनको बीचमा कम्तिमा ३० मिनेटको ग्या’प हुनैपर्छ । यदि सम्भव भयो भने फलफूललाई तपाईंले रातिको खाना खानुभन्दा एक घण्टा अघि नै से’वन गर्नसके अझ राम्रो हुन्छ । यसो गर्दा पा’चन त’न्त्रले दुबै प्रकारका खानालाई राम्ररी प’चाउन सक्छ ।
Prevपा’स्टरले सात दिनपछि जि’उँदो हुने भनेपछि पाँच दिनसम्म घरमै ला’स राखियो
Nextअब ९० मिनेटमै कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट !
मनोकामना माइको दर्शन गर्दै माघ ०१ गते बिहिबार को राशिफल हेर्नुहोस
नायिका श्वेता खड्का को विवाह पछी करिश्मा मानन्धर ले किन यस्तो भनिन (भिडियो सहित)
सीमामा आइपुग्यो रेल सेट ,नेपाल भित्र्याउन बाँकी
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32683)